किन पिउने खाली पेटमा पानी? :: Setopati
किन पिउने खाली पेटमा पानी?
सेतोपाटी संवाददाता काठमाडौं, भदाै‍ १८
मानव जीवनका लागि अत्यावश्यकिय पदार्थ हो, पानी। पानी पटक–पटक खाइरहेमा प्रायजसो रोग निर्मूल हुने चिकित्सकहरु बताउँछन्। अझै खाली पेटमा पानी खाएमा स्वास्थ्यलाई झनै फाइदा पुग्ने बताइन्छ।
कतिपय मानिसहरु खाली पेटमा पानी खाएर मात्रै अन्य खानेकुरा खाने गर्छन्। तर खाली पेटमा पानी खाँदा के फाइदा हुन्छ अझै धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ। जसका फाइदाहरु यहाँ दिइएको छः
बिहान खाली पेटमा प्रशस्त पानी पिउनाले पेटका विकार शौचमार्फत गएर पेट सफा हुन्छ। जसले पाचन प्रणालीलाई समेत सहयोग गर्छ।
बिहान शौच नआएमा कम्तिमा दुई गिलास मनतातो पानी खाली पेट खाँदा खुलेर शौच आउँछ। हामीले जति धेरै पानी पिउँछाै‌ शरीरबाट त्यति धेरै विकार फाल्न सहयोग पुग्छ।
टाउको दुख्नबाट बचाउँछ
पर्याप्त पानी नपिउनाले बारम्बार टाउको दुख्ने समस्या हुन्छ। डिहाइड्रेसनको मुख्य लक्षण टाउको दुख्नु हो। यसकारण बिहान उठ्ने वित्तिकै पानी खाएमा यो समस्याबाट विस्तारै मुक्ति होइन्छ। यससँगै प्रसस्त पानी पिउनाले श्वासको दुर्गन्ध र अन्य व्याक्टेरियाको संक्रमणबाट समेत बच्न सकिन्छ।
शरीरका लागि नियमित खाना खानु महत्वपूर्ण हुन्छ। तर कतिपयलाई भोक नै नालाग्ने समस्या हुन्छ। त्यसैले, भोक जगाउन खाली पेट पानी पिउनु उत्तम उपाय हो। बिहान उठ्ने बित्तिकै खाली पेटमा दुई गिलास मनतातो पानी पिएमा भोक लागिरहन्छ।
एक गिलास पानी खाली पेटमा खाएमा कोलोन (पेटमा रहेका विकार) सफा हुन्छ। कोलोनमा जम्मा भएको लेदो र विकार सफा हुन्छ। कोलोन सफा भएपछि शरिरलाई आवश्यक पोषक तत्व शोषण गर्न समेत सहज हुन्छ। कोलोन सफा भए पुरै शरीर नै स्वस्थ हुन्छ।
छालामा चमक आउँछ
खाली पेट प्रशस्त पानी पिउँदा अनुहारको चमक बढ्छ। शरीरमा जति बढी विकार तत्व हुन्छ त्यति नै अनुहारको छाला नराम्रो देखिन्छ।
तर, हामीले प्रशस्त मात्रामा पानी पिउँदा शरीरको विकार हट्छ र अनुहारमा चमक आउँछ।
डाइटिङ गर्ने व्यक्तिले पनि खाली पेट पानी खानु राम्रो हो।
पानी पिउँदा न्यूनतम २४ प्रतिशतले मेटाबोलिजमलाई वृद्धि गर्छ। जसको अर्थ हामीले चाडो र प्रभावकारी रुपमा खाना पचाउन सक्छौं। यसले छोटो समयमा नै तौल घट्न सहयोग पुग्छ।
रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्छ
शरीरमा तरल पर्दाथको सन्तुलनका लागि पानी अत्यावश्यकिय तरल पदार्थ हो। दैनिक खाली पेटमा पानी पिउँदा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि हुन्छ। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो भएमा हामीलाई रोग लाग्ने सम्भावना कम हुन्छ।
बिहान खाली पेटमा एक गिलास पानी पिएमा हाम्रो अल्छिपना हराउँछ। किनकि त्यो सयमा रगतका रक्त कोषिकालाई चाँडो बढ्न मद्दत पुग्छ। जति धेरै कोषिकाको बृद्धि हुन्छ त्यति धेरै शरीरमा अक्सिजन प्रवाह हुन्छ र एक प्रकारको उर्जा मिल्छ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, भदौ १८, २०७७, ०५:३३:००
होम आइसोलेसन बस्दा मानसिक समस्याबाट कसरी मुक्त हुने? (भिडिओ)
फाइजर कोरोना खोप सुरक्षित र ९५ प्रतिशत प्रभावकारी भएको दाबी
अल्का अस्पतालले शुरु गर्‍यो पिसिआर परीक्षण,अमेरिकी उपकरण र किट प्रयोग
कोरोना महामारीमा बच्चा जन्माउने योजना बनाउने कि नबनाउने? (भिडिओ)
जहाँ कोरोना बिरामीको प्रश्नको जवाफ रोबोटले दिन्छ...
झापामा अक्सिजन बैंक स्थापना हुने